आज बिहिवार कुन देशकाे कति छ त नेपाल रास्ट्रबैंकको भाउ , जान्नुहोस यस्तो छ आजको बिनिमय दर » बुद्ध भूमि नेपाल
आज बिहिवार कुन देशकाे कति छ त नेपाल रास्ट्रबैंकको भाउ , जान्नुहोस यस्तो छ आजको बिनिमय दर
यस्तो छ आज फेब्रुअरी6तारिख (माघ २३ गते) बिहिवार को बैंक दर ! बिदेश बाट पैसा पठाउदै हुनुहुन्छ ? आज बिहिव कुन देशकाे कति छ त नेपाल रास्ट्रबैंकको भाउ , जान्नुहोस
काठमाडौं । आज बिहीबार यूके पाउण्ड बाहेक सबै देशको विनिमयदर घटेको छ । त्यस्तै आज विहिबार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १ सय १३ रुपैयाँ ६४ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय १४ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको छ। भनेत्यस्तै कतारी रियाल एकको खरिददर ३१ रुपैयाँ २१ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ। त्यस्तै आज साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ४५ पैसा रहेको छ।
भने मलेसियन रिँगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ६० पैसा तथा बिक्रिदर २७ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ। भने आज बहराईन दिनार एकको खरिददर ३ सय १ रुपैयाँ ४३ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ३ रुपैयाँ २ पैसा रहेको छ। भने कुवेती दिनार एकको खरिददर ३ सय ७३ रुपैयाँ ६३ पैसा तथा बिक्रिदर ३ सय ७५ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ।
भने यूरोपियन यूरो एकको खरिददर १ सय २५ रुपैयाँ २२ पैसा तथा बिक्रिदर १ सय २५ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ। आज युएई दिराम एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९४ पैसा छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ। त्यस्तैगरी आज युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १ सय ४८ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रिदर १ सय ४९ रुपैयाँ १५ पैसा रहेको छ।
मूल्य बढ्यो यूरो र पाउण्ड स्टर्लिङको, अन्य देशको भने यस्तो छ
२३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:५१
आकाशियो डलरको भाउ !
२७ चैत्र २०७६, बिहीबार ०५:१९
डलरको भाउ दिनप्रति दिन आकाशिदै,बढ्यो साउदी, कतार दुबई,मलेसिया लगायतका मुलुकको मुद्राको दरभाउ
२३ चैत्र २०७६, आईतवार १०:४६
आज शुक्रबार अमेरिकी डलरसहित अन्य बिदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो
२३ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ०४:४६
आज बुधबार अमेरिकी डलर सहित सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढ्यो !
२१ फाल्गुन २०७६, बुधबार ०५:४२
अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको भाउ बिहीबार घट्यो
८ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०६:५६